TRUESTORY: ကျွန်တော့်လုပ်ခဲ့ရသော လုံခြုံရေး
အဲဒီ အုပ်စုက သူတာဝန်ယူထားတဲ့ နေရာကို ....ဘယ်သူမှ ပေးမ၀င်တော့ဘူး …ကိုယ့်လူအချင်း ချင်းလဲ တာဝန်မရှိရင် ပေးမ၀င်ဘူး …ဒါကို … INT COVER လုပ်တယ်လို့ ခေါ်တယ် ….
စကားမစပ်ပြောရရင် …ရက်စွဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ...ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီက ရဲချုပ်နဲ့ပြောင်းလာတယ် …ပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ သူလျှောက်ကြည့်တယ် ထင်ပါရဲ့…ပြည်လမ်း လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်ချလာတယ် …အပြင်ဂိတ်ကတော့ သူ ဖြတ်လာလို့ ရတယ် …ပြသနာက လွှတ်တော်အတွင်းကို ၀င်မယ်လုပ်တော့ …ဗိုလ်မှူးချုပ်အပွင့် နဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကို ….ခုနက INT COVER က ….
သူ ထိုင်နေတဲ့ ခုံကို ပေးတယ် …ဗိုလ်ချုပ် ခဏထိုင်စောင့်ပါ တဲ့…ကျွန်တော် သတင်းပို့ ပေး ပါမယ်တဲ့…လုံခြုံရေး Incharge ဗိုလ်မှူးက ….ကျွန်တော့်ကို သွားရှင်းပြခိုင်းတယ် …
ကိုယ်တွေရောက်တော့ …ကိုယ် လွှတ်တော်ထဲ ပတ်ကြည့်ချင်လို့ တဲ့ …လွှတ်တော်အနှံ့ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပြပေးတယ်…ဘယ်အခန်းက ဘာလုပ်တာ ရှင်းပြတယ် ..ဒါပေမယ့် …INT COVER လုပ်ထားတဲ့ ဧရိယာကိုတော့ …သူ့ ကို တောင်းပန်ပြီး ပေးမ၀င်ခဲ့ဘူး ….
အပြန် သူ့ PSO ....တစ်ပတ်စဉ်ထဲကောင် က ....ကပ်ဆဲသွားတယ် …
မျိုးဇော်ဝင်း ( ပပ၀င်းခင် အကို ) …ကျွန်တော်ကလဲ သူ မကြိုက်တဲ့....သူ့ နာမည်ပြောင် ကျောက်မိန် ....( နဂါးနိူင်ဓား ရုပ်ရုင်ထဲက ကျောက်မိန်နဲ့ တူလို့) ကို ….မကြားတကြား ရွတ်ပြီး စပ်ဖြီးဖြီး ကျန်ခဲ့တယ် …
အခမ်းအနားနေ့ မှာ ....လူအ၀င်အထွက်ကို ထိန်းချုပ်နိူင်ဖို့….ပရိုတိုကော …အာဂျင်ဒါ …
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေက ....အကုန်တောင်းထားရတယ် …
ဌာနအလိုက် ၀င်မယ့်လူစာရင်း …ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ ၊ ဘယ်သူတွေလဲ …ဘာတာဝန်လဲ ....
ကကလှမ်း ၊ လှမ်း၂ လုံခြုံရေးဌာနမှာ ….အမှူထမ်းလုံခြုံရေး ဌာနခွဲဆိုတာ ရှိတယ် …သူက ကြိုတင်စိစစ်တယ် ….ကျေနပ်ပြီဆို အိုကေ ….စုစုပေါင်း ဘယ်နှစ်ယောက် ….အာ့အတွက် ရင် ထိုးတွေ ထုတ်ပေးလိုက်တယ် …
ရင်ထိုးက နီးမှ ထုတ်ပေးတာ ….ကြိုမပေးဘူး …ပွဲတစ်ခုအတွက် ပုံစံတစ်မျိုး …စထုတ်က တည်းက ...
အရေအတွက် အတိအကျ ....အပိုအလို မရှိ ထုတ်ပေးတာ ...လုံးဝ ပျောက်လို့ မရဘူး ....
ဂိတ်ပေါက်မှာ ၀င်ခွင့်စာရင်းနဲ့တိုက်စစ်မယ် …ရင်ထိုး ပါမပါ စစ်မယ် ….ပြီးမှ ၀င်ခွင့်ပေးမှာ ….
အဲ အထဲရောက်လို့....ရင်ထိုးဖြုတ်ဖို့ တော့ မစဉ်းစားလိုက်နဲ့….ကိုယ်ဘယ်လောက် ပင် ချောချော လှလှ ...လုံခြုံရေး လုပ်ရတဲ့ သူက ....အရင်ဆုံး ရင်ထိုးပါ မပါ စကြည့်တာ …ပြီးမှ လူကို ကြည့်တာ …
ရင်ထိုးမပါရင် အရင်လာမေးမယ် …ရင်ထိုးပြခိုင်းမယ် …မပြနိူင်ရင် မေးခွန်းတွေ အများကြီးမေး မယ် …ရူးသလို ပေါသလို လုပ်နေရင်တော့ ….တာ့တာပဲ ….အနီးဆုံး စစ်ကြောရေး စခန်း ကိုသာ လစ်ပေတော့ ….
တစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ် …အပြင်မှာ ရင်ထိုးကျပျောက်လာတာ ….ဂိတ်ရောက်မှ သိတယ် ….
အခမ်းအနားကြီး တစ်ခုလုံးက …လုံခြုံရေးတွေ အလုပ်ရှုပ်ကုန်တယ် ….
အခမ်းအနားလာတက်တဲ့ ဌာနတစ်ခုစီက အရာရှိငယ်တစ်ယောက်စီကို ....အကူအညီတောင်း …
ဒါ ခင်ဗျားဌာနက ဟုတ်လား… ဟုတ်တယ် …နာမည် ဘယ်သူလဲ ... ဘယ်သူ ....ဟုတ်မဟုတ် စာရင်းနဲ့ ပြန်တိုက် .....ဆရာ ဒီ ရင်ထိုး အသစ်လေး ချိန်းပေးပါ ခင်ဗျား…
အဲဒီလို …..အခမ်းအနား မစမီ ....ရင်ထိုးတွေ အဟောင်းတွေ အားလုံး ….ချက်ချင်း Cancel လုပ်
ရင်ထိုးပျောက်တဲ့ သူကတော့ ...၀န်ကြီးဌာနတွင်း သတိပေးဆုံးမ မိတဲ့ အပြင် ...ရင်ထိုး Set တစ်ခုလုံးစာ ပြန်လျှော် လိုက်ရတယ် ....
လူထု အခမ်းအနား လုံခြုံရေးမဟုတ် …တက်ရောက်သူ ကန့် သတ်ထားတဲ့ …သီးသန့် အခမ်းအနား လုံခြုံရေး ….
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့….လူထုအခမ်းအနားပွဲတွေကို….လုံခြုံရေးစီစဉ်ရတဲသူတွေ …ဘယ်လောက် ခေါင်းခြောက်ရမယ်ဆိုတာ ….အကြမ်းဖျင်း ရိပ်မိလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့ ….
လုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရသူတွေကို ...နည်းနည်းပါးပါး ကိုယ်ချင်းစာနိူင်ဖို့...တင်ပြတာပါ ....လုံခြုံရေး အရ ကိုပဲ ....အရေးကြီးတဲ့ပရိုဆီဂျာတွေ ချန်ထားခဲ့တယ် ...ဖတ်ရတာ တစ်ခုခု လိုနေရင် ခွင့်လွှတ် .... ။ ။
Posted by TRUE STORY at 8:14 AM